Jamba amin'ny varavarankely ho an'ny solika sy gazy eny ivelany, Rigs solika, lampihazo, FPSO, Floatels ary ireo rafitra any ivelany hafa | Solar Solve Marine
ROLASOLV® sy SOLASOLV®
Asio tselatra ho an'ny jiro mirehitra sy ny glare tsy manara-penitra, mandà masoandro amin'ny alàlan'ny alàlan'ny masoandro, indostrian'ny gazy ary ny orana
ROLASOLV® sy SOLASOLV® First Class! Kilasy iraisam-pirenena !
Ny ROLASOLV® Fabric Blackout Valin-jiro dia ny hany volom-bala miparitaka amin'ny alàlan'ny "flute retardant" izay ankamantatra ho an'ny fampiasana azy amin'ny sidina Floatels, solosaina ho an'ny solika, platforms, FPSO's, jack-ups, onshore drilling offshore ary ny hafa onshore Structures. Ireo fanampiana ekipa dia mahazo fitsaharana sarobidy mandritra ny andro mazava miaraka amin'i ROLASOLV®.
Ny SOLASOLV® Transparent Anti-Glare Roller Blinds dia mampihena ny hafanam-po sy ny hafanana vokatry ny masoandro izay mety ho fanelingelenana mampidi-doza eo amin'ny Structures sy ny fantsom-bahoakan'i Offshore toy ny Survey Ships, sambo baolina, fantsona fantsom-panafana, sambo kabirevy, sambo mipetaka sy OSV. Ny fiarovana ny hafanana sy ny hafanana koa dia ilaina amin'ny fikolokoloana ny tontolo iainana azo antoka ao amin'ny efitrano fanaraha-maso, fiaramanidina baolina, cabs ary faritra hafa.
Ampio ny tontolo iainana sy hanatsara ny fiarovana
Ao amin'ny indostrian'ny solika sy orinasa goavam-be dia misy ny tsindry ara-toekarena sy tontolo iainana manamaivanana ny fampiasana herinaratra, manilika ny fako ary mampitombo ny herin'ny angovo. Ny fanamby dia ny fomba hamantarana ireo vokatra izay afaka manampy ireo tanjona ireo. SOLASOLV® anti-glare ny rindrina amin'ny rindrina ary ny ROLASOLV® flame retardant jiro jiro dia afaka manampy amin'izany. Ankoatra ny tombony ara-tontolo iainana mahavelona, ​​ny lafiny fiarovana dia tena zava-dehibe ihany koa.
Ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fantsom-bokatra eny an-dranomasina dia tena ilaina mba ahafahana miasa any amin'ny toeram-piasana tsy misy fepetra - amin'ny fampihenana ny 93% ny haavony sy ny fisaintsainana avy amin'ny masoandro, ny SOLASOLV® dia tsara indrindra ho an'ny varavarankely, ny trano fifehezana, ny cabane, maso / fandaharana, ary varavarankely izay misy zava-dehibe izay azon'ny mpihazakazahana atao amin'ny endriny mazava tsara.
Ny fitazonana ny ekipa tsara indrindra dia zava-dehibe ny hahatonga azy ireo ho faly sy ho mailo - amin'ny fandavana ny 87% amin'ny hainan'ny masoandro ny SOLASOLV® dia mamorona tontolo mahafinaritra sy mahafinaritra. Ireo olana momba ny tontolo iainana koa dia miresaka amin'ny fampihenana ny fangatahana amin'ny rafi-pandrefesana amin'ny rivotra, manampy amin'ny fampihenana ny CO2 mampidi-doza ho an'ny tontolo maitso, madio kokoa, ny famatsiana solika ary ny famatsiana vola.
Ny ROLASOLV® sy ny SOLASOLV® Roller blinds sy ny Sunscreens dia ampiasaina amin'ny Floatels, Oil Rigs sy Offshore Platforms maneran-tany
- Seadrill "West Telesto" dia nampiakatra rig -
- Seadrill Tarika fandavahana semi-submersible an'ny "West Aquarius" -
- Seadrill Sambo fandavahana anaty rano any anaty rano "West Gemini" -
- Maersk "Resolute" jack up fandavahana rig -
- Maersk "Maharesy" mampiakatra ny rig fandavahana ary maro hafa -
Ny lamba miloko manga vita amin'ny mason-tavoahangy mibaribary ny varavarankely an-dranomasina
Ny lamba lamba lamba ROLASOLV® ho an'ny varavarankely anatiny dia karazana nankatoavin'ny DNV ary voafaritra matetika ho an'ny varavarankely amin'ny floatels, rig, sehatra fampiantranoana, FPSO's, sambo mpamatsy sy sambo an-dranomasina sy an-dranomasina hafa.
Ny collection ROLASOLV® Fabric dia ahitana karazam-pirafitrana 38, izay manolotra safidy malalaka amin'ny loko sy ny loko, anisan'izany ny jiro, ny manga sy ny tara-pahazavana, mifanaraka amin'ny fehezanteny marobe, ny mari-pamantarana sy ny teti-bola. Taona maro tamin'ny famolavolana drafitra sy ny fahaizana ara-teknika no nifantoka tamin'ny fisafidianana ireo lamba tsara indrindra mba hihaonana ireo fangatahana henjana amin'ny tontolo iainana an-dranomasina.
Solar Solve ihany no misafidy ny hatsarana avo lenta avo lenta izay miezaka mafy mba hahazoana antoka fa afaka mahatohitra fahamaizan'ny hafanana - avy amin'ny arktika mankany amin'ny toe-java-maitso - ary misy ny UV. Manana mari-pamantarana BS5438 izy ireo ary manitsaka ny mari-pahaizana mba hanaraka ny IMO (Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fisoratana) FTPC Fizarana 7 A.563 (14) Fanapahan-kevitra, ny fenitry ny fanandramana firehetana ho an'ny Textiles sy Films.
Na mila jiro tokana na vahaolana feno ho an'ny sehatra fandraisam-bahiny ianao dia manana ny vokatra isan-karazany miaraka amin'ny lamba marobe hofidiana ny Solar Solve. Ny Solar Solve Customer Service Services dia afaka manome toro-hevitra sy fitarihana momba ny safidy mety indrindra amin'ny tapa-damba ho an'ny rafitra noforonina sy ny endriky ny tetikasanao manokana, ary manampy anao hamorona ny tontolo manodidina anao. Raha tsy afaka mahita izay tena tadiavinao ianao, dia ho faly ny hanome loharano hafa hanaraka ny fepetra takinao.
Ny fitaovana Aluminium sy ny fitaovana ampiasaintsika dia voafidy noho ny faharetany sy ny fifandraisany amin'ny tontolo iainana an-dranomasina. Ny raki-peo dia azo faritana amin'ny fisafidianana ny loko 400 RAL miaraka amin'ny endritsaka mafana na gloss.
Ny jiron'ny jiro ROLASOLV® dia mety ho an'ny ankamaroan'ny varavarankely tsy miankina, anisan'izany ny efitrano fisakafoana sy ny teatra, ary ny jiro mitam-basy ho an'ny trano fonenana manampy ny manatri-maso ny alina dia mila torimaso tena ilaina mandritra ny andro mazava, manampy amin'ny fisorohana ny reraka.
Ny vokatra rehetra dia natao manokana, azo alaina mora foana, mora ampiasaina ary mora ampiasaina.
ROLASOLV® no hany Roller Blinds izay karazana nankatoavin'ny DNV hampiasaina amin'ny sehatra ivelany, rig solika ary floatels.
Safidin'ny loko lehibe. Tetikasa maimaim-poana vita!
Tsindrio eto raha azonao ny ohatrao
Mangataha ny marika ROLASOLV® amin'ny anarany mba ahazoana antoka fa ny fiaranao dia manana fiarovana tsara indrindra sy azo antoka amin'ny alàlan'ny fananganana vaovao, famerenana, fanavaozana ary fivoarana ... .manam-pahaizana hanao sy hikojakojana.
Tiantsika ny hanome fahafaham-po ny mpanjifa sy hahazo mpanjifa maro mifanentana toy ny Technip, Stena Drilling, Seadrill, Ocean Rig ary Subsea 7. Ny toro-hevitra ara-teknika dia maimaimpoana ary afaka manamboatra sy mandefa haingana. Koa satria ny marika No. 1 manerantany ho an'ny jirosin-java-manerantany manokana dia tsy ho diso fanantenana ianao.
ROLASOLV Blackout Blind & Roller Blind tombontsoa: -
Karazan-dàlana ekena - Ilay karazan-javamaniry marin-jaza an-dranomasina IHANY no nankatoavin'ny DNV
Ny vahaolana delestazy mety indrindra - ho an'ny kabine, teatra ary efitrano fanaraha-maso
Vovobony milanja volom-borona miaraka amin'ny flamme BS5438 dia manaparitaka mari-pankasitrahana
Miaraka amin'ny IMO FTPC Fizarana 7 A.563 (14) Fanapahana afo
Kalitao avo lenta - Namboarina manokana ho an'ny fampiasana ranomasina
Maintenance ambany - Mora apetraka ary tsotra ny miasa
Custom Made - Ho an'ny mpanjifa tsirairay dia refy sy famaritana marina
Mangataha fampisehoana iray mba hanànanao ny sambo na alam-barotra an-dranomasina voaaro amin'ny jiron'ny rolasolv®.
STOPLITE® - MIjanona amin'ny toerana rehetra!
STOPLITE® dia jamba mainty ho an'ny varavarankelin'ny kabine izay mampihena be ny hazavan'ny andro hamoronana fepetra fatoriana tonga lafatra. Tsy misy rojo na tady - Mijanona amin'ny toerana misy anao.
MIEZAHA HIFOKA AMINTSIKA ETO
Solon'ny mason-tsivana maivana ho an'ny Windows, Cranes, Towers Control + maro hafa
SOLASOLV® Anti Glare Roller Screen dia miaro ny ekipa manohitra ny voka-dratsin'ny fipoahan'ny masoandro sy ny hafanana amin'ny hafanana rehefa manolotra endrika 100% tanteraka. Ny haavon'ny aterineto dia manohitra ny 93% ny famirapiratana ary mampihena ny fiheveran'ny maso sy ny fisaintsainana ny fisehoana elektronika sy ny fanaraha-maso ny paikady dia mora kokoa ny mamaky fa diso ny fahadisoana ataon'ny olona.
Mitsitsia vola ary mampihena ny emissions CO2 - tsy dia be loatra ny fangatahana apetraka amin'ny rafitra fanamafisam-peo ka tsy misy heriny intsony. Ireo orinasa mahatsiaro tontolo iainana dia afaka mahazo tombony amin'ny alàlan'ny fametrahana efijery SOLASOLV® isaky ny varavarankely mba hampihenana ny vidin'ny fandehanana.
Mangataha ny marika SOLASOLV® amin'ny anarany mba ahazoana antoka fa ny fiaranao dia manana fiarovana tsara indrindra sy azo antoka amin'ny alàlan'ny fananganana vaovao, fanavaozana, fanavaozana ary fivoarana ... .araraotina hanao sy hikojakojana.
Fahitana tsara sy azo antoka - Fiarovana marevaka tsara indrindra hatramin'ny 93% reduction mba ahafahana mijery ny fahitana mazava sy ny fiarovana / fiasa azo antoka.
Ny loko marina no voatazona - Ny jiro sy ny mari-pamantarana miloko marevaka dia mora fantarina ary tsy voavoatra velively.
Mitombo ny masony - Ny olana mitam-bintana sy ny fisaintsainana amin'ny takelaka elektronika dia nesorina ka dia mora kokoa ny mamaky azy ireny.
Tontolo iainana miasa - mamorona tontolo iainana miadana kokoa ary mampihena ny fepetra takian'ny rivotra. Vetivety amin'ny 87% ny hafanana amin'ny masoandro dia nolavina mba hanamaivana ny fahaverezan'ny mpiasa.
Miaro ireo faritra miharihary ao amin'ny vatana - farafahakeliny 98% amin'ny hazavana UV manimba avy amin'ny masoandro no voasivana.
Atao ho Manokana - ho an'ny mpanjifa tsirairay ny mombamomba ny fisoratana sy ny fepetra manokana. Mety ho tranobe vaovao na retro-paoma sy ny endrika maoderina, angady sy ny haben'ny varavarankely.
Quality Assured products - Ny vokatra rehetra dia azo antoka. Ny sarina SOLASAFE® dia manana fiantombohan'ny taona 7.
Safidy ny lokon'ny loko loko - volamena, volafotsy, volondavenona sy varahina.
Mora ampiasaina, haingana sy mora ny mametraka - singa iray feno miaraka amin'ny torolàlana feno. Omena ny fitaovana rehetra.
Free spare parts - miaraka amin'ny filaharan'ny fiadanana rehetra.
Tombontsoa sy endriky ny COMPANY
Quality Assured company - Solar Solve dia mpanamboatra kalitao ankatoavin'ny SSMQA.
Asa fanompoana haingana - Manolotra fanadihadiana maimaimpoana maimaim-poana, fanamarihana maimaim-poana sy fanamafisana ny serivisy isika.
Fepetra haingana - mazàna ao anatin'ny 5 andro fa misy serivisy 'iray andro' ho an'ny baiko maika.
Ny vokatra azo antoka sy ny fanompoana - Fantatsika fa ny vokatra sy ny serivisy dia tsy azo tratran'ny toeram-pamokarana sy ny kalitaon'ny olona hahazoana antoka sy fahombiazana ambony indrindra. Ny fampiasam-bola tsy tapaka ataonay amin'ny olona sy ny toerana dia manome ny mpanjifa matoky ny hatsaran'ny vokatra Solar Solve. Ny mpiasanay dia mirehareha amin'ny asany sy ny lazany ho an'ny kalitaony. Ny vokatra rehetra dia vita amin'ny UK amin'ny fampiasana singa avo lenta avo lenta.
Fanatsarana tsy tapaka - Ny Solar Solve dia manana rafitra fanatsarana tsy tapaka. Ny mpiasanay dia mianatra ireo fahaiza-manao ilaina mba hanamboarana vokatra avo lenta sy azo antoka ao amin'ny Foibe fampiofanana ato aminay.
Ekipa teknikan'ny teknikam - Ho an'ny fanontaniana sy fanontaniana momba ny fametrahana, ny fampiharana na ny fametahana jamba na ny efijery, dia vonona ny hanampy foana ny injeniera za-draharaha sy ny mpiasa an-tsitrapo.
Ekipa fananganana - Ny ekipa mpanazatra efa za-draharaha dia azo ampiasaina eran'izao tontolo izao raha ilaina ny fepetra, ny fanadihadiana na ny serivisy fametrahana.
Mangataha fehezan-teny hananana ny sambo na alam-barotra an-dranomasina izay arovan'ny SOLASOLV® anti-glare, ny fametrahana ny jaky.
Ny momba ny ROLASOLV® Blackout dia ny jiro ho an'ny Floatels, Oil Rigs, Platforms, Sambo vaventy ary ny fanamoriana hafa an-dranomasina
Ny lamba manam-pahaizana manokana ampiasaina amin'ny ROLASOLV® Blackout Roller Blinds dia mijanona amin'ny lelafo ary efa nosedraina mafy mba hahazoana miaritra ny hafanan'ny hafanana. Ny volonay dia manana fanamarinana fielezan'ny BS5438 ​​ary mifanaraka tanteraka amin'ny fanapahan-kevitry ny IMO (International Maritime Organisation) FTPC Fizarana 7 A.563 (14).
Fantatrao ve? IMO FTPC Fizarana 7 A.563 (14) no fenitra fitiliana afo lehibe indrindra ho an'ny lamba sy sarimihetsika izay hampiasaina amin'ny sambo an-dranomasina. Tamin'ny 1 Jolay 2002, fepetra vaovao feno momba ny fiarovana ny afo, ny fahitana ny afo ary ny fanjavonan'ny afo an-tsambo no niditra ho toko vaovao II-2 an'ny Fivoriambe Iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny fiainana an-dranomasina (SOLAS). Ny fepetra takiana voalohany amin'ny fiarovana ny afo ho an'ny fandefasana entana any ivelany dia novolavolaina tamin'ny taona 1914 tao anatin'ny Fifanarahana SOLAS ho setrin'ny fianjeran'ny Titanic tamin'ny 1912. (loharano: www.imo.org).
Maro ny lozam-bolo manangona ny jiro solona Solar Solve Solana izay mety ho matory tsy misy na inona na inona. ROLASOLV® Blackout Jiro jiro dia fiarovan-tena ho an'ny fiarovana sy fampiononana maivana ary ny Jiron'ny jiro tokana izay karazana noheverina ho ampiasaina amin'ny toeram-pitrandrahana amoron-dranomasina. Solar Solve Blackout Roller Mamoritra ny andro amin'ny alina ka ny ekipa dia afaka mandry torimaso tsara na inona na inona fotoana. Ny orinasa orinasa mpamokatra solika sy orinasa dia mitady ny tantsahan'izy ireo hahazo ny habetsaky ny fialan-tsasatra rehefa tsy mivaona izy ireo ka izany no antony ilazan'izy ireo ny ROLASOLV® Blackout Roller Blinds amin'ny alàlan'ny toeram-pitrandrahana sy ny toeram-pitrandrahana hafa. Tsindrio ity rohy ity mba hahafantarana bebe kokoa momba ny Jirama-jiro STOPLITE Blackout.
Misimisy kokoa momba ny SOLASOLV® Anti-glare, ny hafanana manilika ny jiro amin'ny masoandro mangarahara ho an'ny sambo an-dranomasina, ATC Towers, Cranes ary maro hafa…
Ny sarimiham-boninkazo ampiasaina amin'ny SOLASOLV® Anti Glare scrolls dia misy amin'ny loko efatra - GOLD sy SILVER Reflective, ary GRAY sy BRONZE tsy misaina. Ny sarimihetsika sarimihetsika manokana dia natsangana tamin'ny fampiasana sarimihetsika sarimihetsika polyester. Ny sarimihetsika dia voahodina mba hampihenana ny rivotra ary ny hafanana dia nolavin'ny alim-bary misy lamandy ao anaty sarona polyester. Ny mpandoka UV dia tafiditra ao anaty sarimihetsika polyester mba hanampy amin'ny fanafoanana ny ankamaroan'ny hazavana UV amin'ny masoandro. Ny sarimihetsika GRAY dia misy amin'ny fehikibo misy poizina. Ny takelaka scrolla dia tsy maintsy ilaina mandritra ny ora tara-masoandro ary tokony haverina amin'ny alina.
Ny sarimihetsika matevina dia napetaka amin'ny rindrin'ny alim-bosotra mavesatra ao anaty kavina fantsom-bokatra misy alim-bary misy kofehy matevina amin'ny alàlan'ny biriky entin-tanana mba hiarovana amin'ny vovoka sy ny vovoka. Mahomby, azo itokisana ary maharitra izy ireo. Ny sarimihetsika dia tsy misy fiantraikany eo amin'ny mari-pana ambanin'ny zero, ny hafanana ety ivelany na ny hafanana. Antony manan-danja amin'ny rindrina amin'ny rindrina izay ampiasaina amin'ny sehatry ny asa. Misy sarina tsy misy kasety ihany koa.
Ny fitifirana tilikambo sy ny cabane matetika dia manana varavarankely izay manindrona na miverina
• Mametrahana rindrina misy randran-tsolika tsy tapaka ary dingan-davenona boribory roa. Ity rafitra ity dia mihazona ny efijery amin'ny fisakanana tsy tapaka mba hahafahan'izy ireo mitsahatra na aiza na aiza, ary ny tady dia tsy mandeha eny ambonin'ny vera rehefa voatana ny efijery.
• Ny rindrina amin'ny rindrina dia mety ho vita amin'ny kirany na eo amin'ny andaniny roa. Ny fametrahana eo an-tampon'ny varavarankely, ny tendrony ambony dia tsy maintsy farafara kokoa noho ny ambany. Raha toa ka mihamafana amin'ny farany ambany ny varavarankely dia tsy maintsy apetraka eo ambany faritry ny fikandrana.
FANAMARIHANA: Ny sarimihetsika sarimihetsika dia mitaky ny fidirana (seam) manerana ny sakany ho an'ny efijery izay lehibe kokoa noho ny 1800 mm amin'ny sakany sy ny latsaka.
Ny faran'ny horonan-tsoavaly dia vita amin'ny alim-bary misy alim-barila ambany. Ny rindrina amin'ny rindrina dia misy randran-tseranana, fanaraha-maso enta-mavesatra na rafitra elektrika.
Ny horonan-tsarimihetsika dia azo amidy fiarovana ambony, tapa-kofehy na fikakotra. Ny fiarovana rehetra, ny familiana sy ny takolaka dia omena